Sawirka Shahaadada - Linqing Xinri Precision Bearing Co., ltd.
LINQING XINRI QAADASHADA DHALINTA CO., LTD. waa soo -saare ku takhasusay qoyska tan iyo sannadkii 2006, Falsafaddayada: ku hel kalsooni daacadnimo, ku guulayso tayo, ku horumari hal -abuurnimo, oo ka dhig fursadahayaga annaga oo adeegsanayna ruux dhiirran.
Iyada oo iibka sanadlaha ah ee adduunka in ka badan US $ 150 milyan iyo awoodda sanadlaha ah ee gudaha in ka badan 7000 milyan oo xirmooyin ah, tas-hiilaadka guud ahaan ka badan 2 milyan oo cagood oo laba jibbaaran, XRL waa mid ka mid ah soosaarayaasha waaweyn ee dhalidda adduunka. Dhab ahaantii, XRL waxaa hore loogu iibiyay in ka badan 120 dal oo adduunka ah.
Iyada oo loo marayo dadaallada wadajirka ah ee dhammaan shaqaalaha iibinta ee XRL dhalista, waxaan horeba ugu dhoofinnay 120 waddan oo adduunka oo dhan ah.
XRL waxaa sidoo kale lagu xusey adeegga ugu sarreeya, jawaabta leh, adeegga 24/7/365-dhammaan emayllada iyo farriimaha codka waxaa lagu soo jawaabaa lix saacadood gudahood, waa la dammaanad qaaday!